Vharazipi: Singing zvamutsana mutsana, madzibaba na officer, zvamutsana mutsana... bvisa madzibwa iwe! Kusati "Rufaro kwamuri" kunorovesa netsvimbo. Kusabvisa shangu pamasowe kunorovesa. Kusabvisa hat, kunorovesa. Ndakakuudzai VaMayaya kuti Mudhogo wakazviedza izvi, haikona kuzvidza masowe.
vharazipi chinoz gumbura mai chisamba prophet magaya Macheso